खतरामा भगवान ! – U News7
खतरामा भगवान !
December 8, 2016 March 18, 20170Comments
काठमाडौं/ हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र बनेको जुम्लाको Cheap Jerseys चन्दननाथ मन्दिरमा मंसिर ११ गते भएको मूर्ति चोरी cheap jerseys घटनाको प्रहरी अनुसन्धान जारी छ oakley outlet । काठमाडौंबाट गएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोली घटनास्थलमा छ cheap ray bans ।
गृहमन्त्रालयले घटनाको चासो मात्र दिएको छैन, जतिसक्दो चाँडो घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दबाब पनि दिइरहेको छ । तालुकदार मन्त्रालय र पुरातात्व विभागले घटनाका सम्बन्धमा चासो देखाइरहेका छन् । जुम्लेलीहरू सडकमै ओर्लिएर मूर्ति खोज्न दबाब दिइरहेका छन् । जुम्लाको घटनाअघि डोल्पाको शे गुम्बाबाट पाँच थान प्राचिन बहुमूल्य मूर्ति चोरिएका थिए । प्रहरीका अनुसार तथ्यांक घटनाक्रमले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका cheap jordans बहुमूल्य, पुरातात्विक र प्राचिन मूर्ति, शिलालेख तथा स्मारक खतरामा रहेको संकेत देखिएपनि खतरा कसबाट и ? प्रहरी स्वयम् अलमलमा छ । —नागरिक दैनिकबाट
← बूढीगण्डकी आयोजनाको आधा पानी खेर जाने
नेपालको इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकार तोडियो →